सुतेका बेलासमेत ‘मलाई न’मार्नुस्’ भन्दै चिच्याउँछन् रुकुम घटनाका घाइते – Enepali News
June 21, 2020 373
भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विकसहित छ जनाको ज्यान जाने गरी गत जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको चौरजहारी–८ सोतीमा भएको घटनामा सुदीप घाइते भएका थिए। उनीसहित १२ जनाले बल्लतल्ल ज्यान जोगाउन सफल भए तर मरणासन्न हुनेगरी पि टिए । सुदीपलाई प्रहरीले उद्धार गरी मिसन अस्पताल लगेको थियो ।
त्यहाँ उनलाई सकसपूर्ण दुई रात बिताउनुप¥यो । घाउ पूरा निको नभए पनि उनी त्रा सकै कारण घर फर्किनुप¥यो । प्रहरी, सञ्चारकर्मी र अन्य आफन्तले के भएको हो ? कसरी घटना भयो ? सोधेर हैरान पारेपछि आफू घर आएको सुदीपको भनाइ छ । बेलाबेला उहाँलाई त्यही नवराज लगायतका साथीहरूले बचाउ बचाउ भनेको आवाज कानमा गुञ्जिरहन्छ ।
Prevबेला बेला डर लागेपनि सम्हालिएर अगाडि बढ्दा कोरोनालाई जिते
Nextअभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले बिदा लिइन् ट्वीटरबाट